Kalfadhiga Baarlammaanka Soomaaliya oo maanta furmaya - Halbeeg News
Kalfadhiga Baarlammaanka Soomaaliya oo maanta furmaya
MUQDISHO (HALBEEG) – Kalfadhiga afraad ee labada aqal ee Baarlammaanka 10aad ee Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah ka furmi doona magaalo madaxda dalka ee Muqdisho.
Munaasabadda furitaanka Baarlammaanka ayaa ka dhici doonta Iskuulo Bolisiyo, iyadoo ammaanka magaalada Muqdishana maanta siweyn loo adkeeyey, waddooyinka qaarna goor hore oo saaka ahayd la xiray.
Xildhibaannada Aqalka Hoose iyo Aqalka Sare ee Baarlammaanka ayaa labadii bilood ee u dambeeyey ku jirey fasax, waxaana badankoodu ay booqashooyin iyo kormeerro shaqo ugu maqnaayeen deegaannadii laga soo doortay.
Guddoomiyaha Baarlammaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa iclaamiyey bishii hore ee August 20keedii, in kalfadhiga labada aqal ee Baarlaammaanku furmi doono September 10, 2018 oo ku aaddan maanta.
Kulanka Baarlammaanka waxaa si rasmi ah u firi doona islamarkaana khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeedin doona Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamad Cabdullaahi Farmaajo.
Madaxweynaha ayaa la filayaa in khudbaddiisa uu diirradda ku saari doono arrimo ay kamid yihiin isbedellada siyaasadeed ee ka socda gobolka Geeska Afrika iyo khilaafka soo kala dhex galay Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada.
Xildhibaannada labada aqal ee Baarlammaanka Soomaaliya ayaa inta lagu guda jiro kalfadhiga afraad ka doodi doona xeerar iyo shuruuc dhowr ah oo horay golaha wasiirradu usoo meel mariyeen.